Maamulka Galmudug oo Ku Baxay Xiisad Ka Taagneyd Gobolka Galgaduud – Goobjoog News
Maamulka dowlad goboleedka Galmudug ayaa ku baxay xiisad colaadeed oo maalmihii dambe ka taagneyd degaannada Baxdogaabo iyo laasbuur ee gobolka Galgaduud. halkaas oo ay ku dagaalameen labo maleeshiyaad kasoo kal jeeda laba beelood oo gobolka wada dega ,waxaana tagay goobta mas’uuliyiin kala duwan.
Xildhibaanno wasiiro hore saraakiil ciidan, guddoomiye ku-xigeenka gobolka Mudug iyo maamulka degmada Cadaado oo gaaray oo shalay gelinkii dambe gaaray deegaanka Laasbuur ayaa waxaa ay burburiyeen baco dhulka lagu aasay oo loo egeysiiyey Barkadaha biyaha lagu keydsado oo xiisadda colaadda dhalisay ay ka bilaabatay.
Mas’uuliyiinta gooobta tagay ayaa sheegay in aysan marnaba ogolaan doonin in dagaal laga abuuro, gobolka Galgaduud iyo colaad laga dhex dhigo beelaha waalaha ah ee wada dega halkaasi, mas’uuiyiinta waxaana ay ciidanka amniga ay ugu baaqeen in ay tallaabo qaadan haddii ay arkaan shaqaaqooyinka nuucaan oo kale ah .
Gobolka Galgadyuud ayaa waxaa inta badan ka dhaco dagaal beeleedyo u dhaxeeyo beelaha wada dega gobolka xiliyada la gaaro waqtiga roobka oo dadku isu guuraan, waxaana jirtay dhowaan sidaan oo kale dagaallo ay uga dhaceen deegaannada Qalaanqalle ‘ Xananbuure iyo Kaxandhaale oo ah dhanka xuduudda dalka Itoobiya.